काठमाडौं उपत्यकामा थपिए अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित ( कुन ठाउँमा कति हेर्नुहोस् ) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं उपत्यकामा थपिए अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित ( कुन ठाउँमा कति हेर्नुहोस् )
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित ( कुन ठाउँमा कति हेर्नुहोस् )
काठमाडौं, २७ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ३४ संक्रमित फेला परेका छन् । यो अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन फेला परेको सबैभन्दा बढी संख्या हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ३४ संक्रमित थपिएका हुन् । जसमध्ये काठमााडौंमा मात्र १ सय १० संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुर १६ संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै भक्तपुरमा ८ जना संक्रमित देखिएका छन् । योसंगै काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या एक हजार ३ सय १८ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका २८ जनामा, ललितपुरका १ जनामा र भक्तपुरका ४ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका २० जनामा र भक्तपुरको २ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने स्टार अस्पताल सानेपाको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका १४ जनामा र ललितपुरका १ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
यता प्रहरी अस्पतालमा गरिएका परीक्षणमा काठमाडौंका ५ जनामा संक्रमणसंक्रमण देखिएको छ । यसैगरी वीर अस्पतालमा काठमाडौंका ३ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । यता ह्याम्स अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका ८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा गरिएकोे परीक्षणमा भक्तपुरका १ जनामा र बीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौंका ३ जनामा पुष्टि भएको छ ।
यस्तै बीर अस्पतालमा काठमाडौंका ३ जनामा र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा काठमाडौंका २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै काठमाडौंमा संक्रमितको कुल संख्या १ हजार ६२ , ललितपुरमा १ सय ५९ र भक्तपुरमा ९७ संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या कुल संख्या १ हजार ३ सय १८ पुगेको छ ।
र,क्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली से,ना आ,बस्यक परे युद्ध गर्न तयारी अबस्थामा भनेपछि . (पूर हेर्नुहोस)
चुनावकै मुखमा पत्रकार ऋषी धमला घा’इते !
घर भाडामा ५०% छुट गर्न सरकारको आदेश !
सन् २०२१ काे अन्तिम सूर्यग्रहण, कहाँ-कहाँबाट देखिन्छ ?